Ndege dzeUS dzingangoda kudzoreredza mari yekunonoka kutakura mukwende
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Ndege dzeUS dzingangoda kudzoreredza mari yekunonoka kutakura mukwende
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Ndege dzeUS dzingangodikanwa kudzoreredza mari pane kunonoka kutariswa mukwende
Chirongwa ichi chinoda kudzorerwa kana ndege dzikatadza kuendesa bhegi mukati memaawa gumi nemaviri mutyairi weUS achibata pasi kana mukati maawa makumi maviri nemashanu yendege yepasi rose.
Mitemo yazvino inoda kudzorerwa chete kana mabhegi akarasika.
Mari yekubhadhara-bhegi ndiyo yekutanga yemitemo yakati wandei-yevatengi inouya kubva mukutungamira kweMutungamiri weUS, Joe Biden.
Kana ichibvumidzwa, chikumbiro chinogona kutora basa rinotevera zhizha.
Mukuru mukuru ane Dhipatimendi Rekufambisa reUS akataura kuti iyo agency ichaburitsa zano mumazuva mashoma anotevera ayo angangoda kuti ndege dzidzosere mari pamutoro wakatariswa kana mabhegi asina kuendeswa kune vafambi munguva "inonzwisisika".
Chirevo ichi, kana chikaitwa chekupedzisira mushure menguva yakareba yekunyora-kunyora maitiro, zvaizodawo kudzorerwa nekukurumidza kwemitero pazvimwe zvakadai sekuwana internet kana ndege ikatadza kupa sevhisi panguva yekufamba.
Kana zvikatenderwa, chikumbiro chinogona kuzotanga nezhizha rinotevera, mukuru akawedzera.
Mitemo yazvino inoda kudzorerwa chete kana mabhegi akarasika, kunyange hazvo ndege dzendege dzinofanira kubhadhara vatakurwi nezve "zvine musoro" zvemari dzinowanikwa apo mabhegi avo anonoka. Hurumende haizive kuti kangani ndege dzinochengeta fizi kunyangwe mabhegi achinonoka zvakanyanya.
Mari yekubhadhara-bhegi ndiyo yekutanga pamitemo yakati wandei-yevatengi inouya kubva kuhutungamiriri hweMutungamiri weUS Joe Biden pasi pemutemo mukuru uyo ​​mutungamiri achazosaina, sekureva kwemukuru weDhipatimendi reZvekufambisa (DOT), akataura nemamiriro yekusazivikanwa kuti ukurukure chikumbiro chisina kuburitswa pachena. Iwo marongero acho anozogadzirirwa kukwikwidza uye kupa vatengi simba rakawanda, akadaro mukuru uyu.
Gore rakapera, vatengi vanopfuura zviuru zana vakanyunyuta kuhurumende nezvebasa renhandare. Kudzoserwa kwaive kwakanyanya gripe, kunyange ndege zhinji dzainzi dzakaramba kupa mari kune vatengi vakanzura nzendo nekuda kwedenda. Dhipatimendi Rekufambisa riri kutsvaga faindi yemamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora kurwisa Air Canada, asi haina kutora danho kune vamwe vatakuri pamusoro pokudzoreredzwa kwendege dzakadzimwa.
Mu2019, gore rekupedzisira rakazara denda risati rasvika, vafambi vakabhadhara ndege dzeUS $ 5.76 mabhiriyoni mubhadharo pamabhegi akaongororwa, sekureva kweDhipatimendi Rekufambisa. Izvo zvakadonha kusvika ku $ 2.84 bhiriyoni gore rapfuura, apo kufamba kwakatsvedza nekuda kwedenda. Iwo manhamba haabatanidzi mari dzekutakura-pamabhegi.